トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Gold UPty (Gold Aputi) [esijikelezayo amatyala-kuphela]
Le ndlela yokubala ethe ngqo, ngokuba wonyaka
inkqubo balance isilayidi, ukuba ilingana no okanye inkulu ngaphezu iintlawulo ubuncinane, ungabeka ngokukhululekileyo intlawulo yenyanga.
ngetyala ekhoyo 10 Man 3 million yen evela yen
Gold UPty (Gold Aputi) na, yokuba olujikelezayo ngetyala abezingcwalisile iqela Orico likhuphe, kwelinye kuthiwa-card Gold, Airport uyakwazi ukufumana inkonzo yokuzinikela abanini ikhadi kuphela Gold, njl lounge. eliluncedo High ixabiso njengomfuziselo status ebizwa ngokuba yi-, kukho ngetyala eliphezulu aphesheya.
Imali yonyaka njengoko ikhadi kwegolide wammisa ukuba abe ngaphantsi, waba yen 5000 ngonyaka ngamnye. Njengoko umthetho kwiminyaka engaphezu kwama-20 ubudala uzinzile kwaye kukho imeko yengeniso. Usebenzisana Master Card, iyafumaneka kumazwe amaninzi aphesheya. Ukuba ilingana no okanye inkulu ngaphezu iintlawulo ubuncinane, ungenza ngokukhululekileyo ukulungiselela intlawulo yenyanga.
imali yonyaka kuphela kulindeleke ukuba ibe ngaphantsi, izinga ngonyaka lokwenyani kwakhona ephantsi, nto imiselwe ku-10.2%. Xa usebenzisa 150,000 yen, ngonyaka ka-10 umdla yen 150,000. Iba 1299 yen liphindaphindwe iintsuku 31 umahlule ngo le mali iphindwe-2 ekhulwini ngeentsuku ezingama-365. Ngenxa debit kuyimali esingatshintshiyo, ngokomzekelo, naza nina nazimisela abenu isixa kwaimpatho yen-6000, inqununu iya kwabelwa ngu 4701 yen thabatha umdla.
nomsebenzi njengekhadi igolide enkulu, ukongeza ukuya kwisikhululo seenqwelo-moya angasebenzisa egumbini langasese, kuye ehamba inkonzo umthwalo imoto, ndinike iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezingama-365 ngonyaka kwingozi yemoto okanye ukungasebenzi kuwe. iinkonzo zonikezelo umthwalo kunye neenkonzo zokuhamba kwakhona Kuphela abanini ikhadi Gold-moya ngamazwe ziye iinkonzo zobu- ezikhoyo. Basekhaya phesheya inshorensi ingozi zokuhamba nokuba ezingalindelekanga, ukuze kubuyekezelwe ubuninzi yen million 50 ngenxa yengozi.
Ukongeza, oko elivumelana ilahleko okanye ubusela, imvelaphi yayo elandwa phambi 60 iintsuku isaziso umonakalo obangelwe usetyenziso olungagunyaziswanga, usuke umthwalo Orrico waye umonakalo ekusetyenzisweni ngaphandle kwemvume. Njengoko amalungu iGolide Orico, unako ukufumana isibonelelo kolwazi kunye neenkonzo ukonwabela kwamanye amazwe, ungasebenzisa i Honolulu lounge abanini ikhadi Gold kuphela e Hawaii.
nabo iyahambelana ukulondoloza, uyakwazi ukugcina kwimemori esisikhupheli kumazinga umdla omkhulu amalungu ikhadi Gold kuphela. Kukhathazeka imali efunekayo ayisekho ngexesha likaxakeka. Ngaba kwakhona kusetyenziswa imali electronic, engqamana ID kunye QUICPay, oko enokusetyenziselwa ezivenkileni, ezifana kwivenkile lula.
idlula ikhadi samatyala
jikelele olucetyiswayo Abahambi, unako ukufumana ubonelelo lwenkonzo up notshi, abaninzi umaleko elite kunye noshishino abantu uhambo ishishini phesheya, lo ikhadi oko kumlungele na esigqeba loo nkampani.
Ukongeza, ukuba spare 5000 yen intlawulo yonyaka, ukongeza lingafumana full-service, kuba inzala umdla esisikhupheli sokuxhaphakileyo in ngetyala esijikelezayo sikwancedela, yonke intlawulo ngemihla ufuna ukugqiba kwi ikhadi nina nithi ukuba ikhadi ogqibeleleyo abantu.
ikhadi usapho Ngenxa yokuba kukhutshelwa ngaphandle intlawulo yonyaka, nako oko, wayalela abantu abafuna ukusebenzisa ikhadi efanayo kunye nosapho. Njengoko phantse yonke ikhadi uhlelo ukusebenza igolide, kukho ethandwa kakhulu, ungafumana i Awunakuzinyanzela kweyona notshi phesheya.